ဖက်ရှင်ချစ်သူ ယောင်းယောင်းတို့ မဖြစ်မနေ ကြည့်ထားသင့်တဲ့ ရုပ်ရှင် (၅) ကား - For her Myanmar
ဖက်ရှင်ချစ်သူ ယောင်းယောင်းတို့ မဖြစ်မနေ ကြည့်ထားသင့်တဲ့ ရုပ်ရှင် (၅) ကား
ဖက်ရှင်လည်း စိတ်ဝင်စား၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာလည်းကြိုက်တဲ့ ယောင်းယောင်းတို့အတွက် Stella က ဖက်ရှင်ကအသက်လို့တောင် ပြောလို့ရတဲ့ ရုပ်ရှင် (၅) ကားကို ရွေးထားပေးပါတယ်။ ဒီကားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေကြောင့် ဝင်ငွေသန်းပေါင်းများစွာ ရရှိခဲ့တဲ့ အထင်ကရရုပ်ရှင်တွေပါ။ ဒါဆို ဘယ်ကားတွေလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်…
(၁) Devil wears Prada
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီကားဟာဆိုရင်တော့ နာမည်ကျော် မင်းသမီးကြီး Meryl Streep, Anne Hathaway, နဲ့ Emily Blunt အစရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါနော်.. ဖက်ရှင်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရယ်လို့ ဘာမှမရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က နာမည်ကြီး ဖက်ရှင်အယ်ဒီတာမမတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထောက်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ အပေါက်ဆိုးဆိုး အယ်ဒီတာမမနဲ့ ရှပ်ပြာပြာ လက်ထောက်တို့ကြားမှာ ဘယ်လိုအလွဲတွေ ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ….
Chanel, Saint Laurent, Jimmy Choo, Prada စတဲ့ ကမ္ဘာကျော် luxury brand တွေရဲ့ outfit တွေကို ဝေဝေဆာဆာဝတ်ပြထားတဲ့အတွက် ဖက်ရှင်ချစ်သူယောင်းတို့အတွက် အားရစရာပါပဲ။
(၂) Confessions ofaShopaholic
ရှော့ပင်းထွက်ရတာ ဝါသနာကြီးလွန်းလို့ အကြွေးထဲပါ နှစ်နေတဲ့ Rebecca Bloomwood (Isla Fisher) ဟာ သူ(မ)ရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းမှာ အလုပ်မရလို့ ကုမ္ပဏီတူတဲ့ financial magazine (စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း)မှာ ဝင်လုပ်ရင်း သူ(မ)ရေးတဲ့ ဘတ်ဂျက်ချွေတာရေးဆောင်းပါးတွေက မထင်မှတ်ဘဲ ပေါက်သွားတဲ့အခါ သူ(မ)ရဲ့အကြွေးတွေကို ဆောင်းပါးပရိသတ်တွေ မသိအောင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားမလဲဆိုတာတော့ ….
ဒါကတော့၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိထားပြီး ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၈.၃ သန်းရရှိခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Coco Before Chanel
ကမ္ဘာကျော် luxury brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Chanel ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Coco Chanel ရဲ့ ငယ်ဘဝအကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ညဘက်တွေ စားသောက်ဆိုင်မှာ သီချင်းဆိုတဲ့ မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်က Paris Haute Couture ထိပ်သီး brand တစ်ခုကို ဘယ်လိုတည်ထောင်ခဲ့လဲဆိုတာကို ဒီကားမှာတွေ့ရမှာပါ။
(၄) The September Issue
ဖက်ရှင်ချစ်သူယောင်းတိုင်း Vogue magazine ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ The September Issue မှာကတော့ Vogue ရဲ့ ဖက်ရှင်အယ်ဒီတာ Anna Wintour ကိုယ်တိုင်ပါဝင်အားဖြည့်ထားပြီး Vogue ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး ဆောင်းဦးဖက်ရှင်ဆောင်းပါးတွေကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလဲဆိုတာ documentry ဆန်ဆန်ကြည့်ရမှာပါ။
(၅) Legally Blonde
ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လိုတရခဲ့သမျှ သူမရဲ့ချစ်သူက သူမကို လမ်းခွဲသွားတဲ့အခါမှာတော့ Elle Wood ဟာ သူမချစ်သူကို ပြန်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် Harvard Law School ကို ဝင်ခွင့်ရဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါတော့တယ်။
Elle Wood အဖြစ် နာမည်ကြီးအနုပညာရှင် Reese Witherspoon က သရုပ်ဆောင်ထားပြီး တစ်ကားလုံးလိုလို ပန်းရောင်အဝတ်အစားနဲ့ ပန်းရောင်ပစ္စည်းတွေပဲ သုံးထားတဲ့အပြင် Elle ရဲ့အချစ်တော် chihuahua ခွေးလေးတစ်ကောင်ပါ ပါဝင်တာကြောင့် ယောင်းတို့ သဘောကျမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၁.၈ သန်း ရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာ Legally Blonde 1 နဲ့ Legally Blond2ဆိုပြီး နှစ်ကားထွက်ရှိထားပြီး ၂၀၂၀ မှာတော့ Legally Blonde3ထွက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ… ဒါဆို ဖက်ရှင်ချစ်သူ ယောင်းယောင်းလေးတို့ သဘောကျ ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်.. နောက်ထပ်လည်း ဘယ်လို စိတ်ဝင်စားစရာ ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေကို ဖော်ပြပေးဦးမလဲဆိုတာ စောင့်ပြီး အားပေးကြပါဦးလို့..
ဖကျရှငျလညျး စိတျဝငျစား၊ ရုပျရှငျကွညျ့ရတာလညျးကွိုကျတဲ့ ယောငျးယောငျးတို့အတှကျ Stella က ဖကျရှငျကအသကျလို့တောငျ ပွောလို့ရတဲ့ ရုပျရှငျ (၅) ကားကို ရှေးထားပေးပါတယျ။ ဒီကားတှဟော သူတို့ရဲ့ အမိုကျစားဖကျရှငျတှကွေောငျ့ ဝငျငှသေနျးပေါငျးမြားစှာ ရရှိခဲ့တဲ့ အထငျကရရုပျရှငျတှပေါ။ ဒါဆို ဘယျကားတှလေဲ ကွညျ့လိုကျရအောငျနျော…
၂၀၀၆ ခုနှဈမှာ ထှကျရှိခဲ့တဲ့ ဒီကားဟာဆိုရငျတော့ နာမညျကြျော မငျးသမီးကွီး Meryl Streep, Anne Hathaway, နဲ့ Emily Blunt အစရှိတဲ့ အနုပညာရှငျတှေ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ရုပျရှငျပါနျော.. ဖကျရှငျနဲ့ ပကျသကျပွီး အတှအေ့ကွုံရယျလို့ ဘာမှမရှိတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျက နာမညျကွီး ဖကျရှငျအယျဒီတာမမတဈယောကျရဲ့ လကျထောကျအဖွဈ ခနျ့အပျခံလိုကျရတဲ့အခါမှာတော့ အပေါကျဆိုးဆိုး အယျဒီတာမမနဲ့ ရှပျပွာပွာ လကျထောကျတို့ကွားမှာ ဘယျလိုအလှဲတှေ ဖွဈလာမလဲဆိုတာ ….
Chanel, Saint Laurent, Jimmy Choo, Prada စတဲ့ ကမ်ဘာကြျော luxury brand တှရေဲ့ outfit တှကေို ဝဝေဆောဆာဝတျပွထားတဲ့အတှကျ ဖကျရှငျခဈြသူယောငျးတို့အတှကျ အားရစရာပါပဲ။
ရှော့ပငျးထှကျရတာ ဝါသနာကွီးလှနျးလို့ အကွှေးထဲပါ နှဈနတေဲ့ Rebecca Bloomwood (Isla Fisher) ဟာ သူ(မ)ရဲ့ အိပျမကျဖွဈတဲ့ ဖကျရှငျမဂ်ဂဇငျးမှာ အလုပျမရလို့ ကုမ်ပဏီတူတဲ့ financial magazine (စီးပှားရေး မဂ်ဂဇငျး)မှာ ဝငျလုပျရငျး သူ(မ)ရေးတဲ့ ဘတျဂကျြခြှတောရေးဆောငျးပါးတှကေ မထငျမှတျဘဲ ပေါကျသှားတဲ့အခါ သူ(မ)ရဲ့အကွှေးတှကေို ဆောငျးပါးပရိသတျတှေ မသိအောငျ ဘယျလိုနညျးလမျးတှနေဲ့ ဖုံးကှယျဖို့ ကွိုးစားမလဲဆိုတာတော့ ….
ဒါကတော့၂၀၀၉ ခုနှဈမှာ ထှကျရှိထားပွီး ဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၀၈.၃ သနျးရရှိခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျတဈကားပဲဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာကြျော luxury brand တဈခုဖွဈတဲ့ Chanel ရဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျ Coco Chanel ရဲ့ ငယျဘဝအကွောငျးကို ရိုကျပွထားတဲ့ ရုပျရှငျဖွဈပါတယျ။ ညဘကျတှေ စားသောကျဆိုငျမှာ သီခငျြးဆိုတဲ့ မိနျးမငယျလေးတဈယောကျက Paris Haute Couture ထိပျသီး brand တဈခုကို ဘယျလိုတညျထောငျခဲ့လဲဆိုတာကို ဒီကားမှာတှရေ့မှာပါ။
ဖကျရှငျခဈြသူယောငျးတိုငျး Vogue magazine ကို သိကွမယျ ထငျပါတယျ။ The September Issue မှာကတော့ Vogue ရဲ့ ဖကျရှငျအယျဒီတာ Anna Wintour ကိုယျတိုငျပါဝငျအားဖွညျ့ထားပွီး Vogue ရဲ့ အရေးအကွီးဆုံး ဆောငျးဦးဖကျရှငျဆောငျးပါးတှကေို ဘယျလိုစီမံခနျ့ခှဲလဲဆိုတာ documentry ဆနျဆနျကွညျ့ရမှာပါ။
ဘဝတဈလြှောကျလုံး လိုတရခဲ့သမြှ သူမရဲ့ခဈြသူက သူမကို လမျးခှဲသှားတဲ့အခါမှာတော့ Elle Wood ဟာ သူမခဈြသူကို ပွနျပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့အတှကျ Harvard Law School ကို ဝငျခှငျ့ရဖို့ အစှမျးကုနျကွိုးစားပါတော့တယျ။
Elle Wood အဖွဈ နာမညျကွီးအနုပညာရှငျ Reese Witherspoon က သရုပျဆောငျထားပွီး တဈကားလုံးလိုလို ပနျးရောငျအဝတျအစားနဲ့ ပနျးရောငျပစ်စညျးတှပေဲ သုံးထားတဲ့အပွငျ Elle ရဲ့အခဈြတျော chihuahua ခှေးလေးတဈကောငျပါ ပါဝငျတာကွောငျ့ ယောငျးတို့ သဘောကမြယျလို့ ထငျပါတယျနျော။ ဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၄၁.၈ သနျး ရရှိခဲ့ပွီး လကျရှိမှာ Legally Blonde 1 နဲ့ Legally Blond2ဆိုပွီး နှဈကားထှကျရှိထားပွီး ၂၀၂၀ မှာတော့ Legally Blonde3ထှကျရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကဲ… ဒါဆို ဖကျရှငျခဈြသူ ယောငျးယောငျးလေးတို့ သဘောကြ ကနြေပျလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျနျော.. နောကျထပျလညျး ဘယျလို စိတျဝငျစားစရာ ရုပျရှငျကားလေးတှကေို ဖျောပွပေးဦးမလဲဆိုတာ စောငျ့ပွီး အားပေးကွပါဦးလို့..
Tags: Fashion, film, Movie, Movie review
Valentine’s Day မှာ ကောင်လေးကိုပေးစရာ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင် (၅)ခု
Stella February 7, 2019